"Strid" - बाइक को मूल डिजाइन। लोकप्रिय मोडेल, लाभ, मूल्यहरु को समीक्षा
संकुचित र मोबाइल वाहन लागि अनुरोध सक्रियतासाथ बीसौँ शताब्दीको अन्तिम दशकमा समयमा शहर मा भयो। यो दिशा मा धेरै विकासक्रम को व्यावसायिक सफलता विकास र व्यक्तिगत परिवहन को नयाँ अवधारणाहरु बढाउन ईन्जिनियरहरु र डिजाइनर धक्का। मध्य-1980 को दशक मा यो लहर मा, यो "Strid" भनिन्छ एक असामान्य बाइक द्वारा डिजाइन गरिएको थियो। साइकल सुरुमा एक बरु extravagant उपस्थिति थियो, तर पछि वर्ष मा विकास प्रशंसक को एक सेना प्राप्त छ रोक्न थिएन। फलस्वरूप, आज त्यहाँ धेरै मोडेल र यो आविष्कार को डिजाइन को संस्करण हो।
यो velobayka को रहस्य के हो? द्वारा र ठूलो कुनै पनि यसको संस्थापक मार्क सैंडर्स प्रतिबद्ध छैन खोल्न, तर यो रद्द गर्दैन लाभ आफ्नो अवधारणा बुझे। डिजाइन सुविधा यो बाइक को कार्यक्षमता र विश्वसनीयता कायम गर्न रोक्न गर्दैन यसको भद्र आयाम छ। र अब "Strid" मोडेल को प्राविधिक सुविधाहरूको बारेमा थप जान्न खडा।
बाइक को संरचनात्मक सुविधाहरू
बाहिरबाट व्हीलचेयर रूपमा ठूलो साइकल स्कूटर वा असक्षम यस्तो लागि पनि उपकरण जस्तो। वास्तवमा, यो फ्रेम देखि भेला सरल निर्माण, तपाईं एक पारंपरिक बाइक मा रूपमा वरिपरि सार्न सक्नुहुन्छ जसमा छ। तर, को पाठ्यक्रम वयस्कहरूको लागि "Strid" साइकिल मतभेद को एक नम्बर छ। एल्यूमीनियम को आफ्नो त्रिकोणात्मक प्राथमिक फ्रेम को मुख्य आधार। सामान्य श्रृंखला बेल्ट स्नेहन आवश्यकता छैन प्रतिस्थापन। सामान्यतया, यी मोडेल नै गति मा सञ्चालन र सुसज्जित छन् डिस्क ब्रेक प्रकार। को संस्करण मा मतभेद भन्दा सामान्यतः आकार वा सम्पूर्ण रूपमा बाइक को पाङ्ग्राहरू को आयाम परिवर्तन संग सम्बन्धित छन्।
क्लासिक बाइक को यस्तो कट्टरपंथी संशोधन को मुख्य उद्देश्य केवल आफ्नो आकार मा एक कमी थियो, तर पनि मोडेल "Strid" संग निपटने सजिलो सुनिश्चित गर्न। साइकल यात्रा सजिलै र चाँडै disassembled र एउटा सानो वजन छ - 10 किलो। यो सम्भव ट्रंक मा सानो आकारको मोडेल को यातायात गरे। नजिक यातायात वा संकीर्ण सडकमा रहेको, तपाई सुरक्षित तरिकाले बाइक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, यो त गुना र हाते झोला रूपमा बोक्न।
गतिशीलता र compactness - वरिष्ठ सहकर्मी देखि "Strid" मोडेल भेद मुख्य लाभ। यो सरल डिजाइन संग प्रयोगकर्ता धेरै मर्मतका संग परेशानी देखि मुक्त। त्यहाँ मरम्मत को एक आवश्यकता छ भने, त्यसपछि यो कुनै समस्या हुनेछ। विभिन्न सामाग्री, बेल्ट, र यति मा बनेको कदम, ब्रेक calipers, पैड, pedals सहित बाइक "Strid" को लागि बजार भागहरु, सामान र स्पेयर पार्ट्स, मा उपलब्ध छ। डी
रूपमा त्यो साइकल डिजाइन, परिवार "Strid" minimalist छ। दायरा धेरै मोडेल comprises, र तिनीहरूलाई सबैभन्दा रोचक एक EVO छ। वास्तवमा, यो संशोधन को मुख्य विशेषता गति स्विच उपस्थिति थियो। यो समाधान को सम्भाव्यता, धेरै शङ्का, तर कुनै पनि मामला मा, एक कार्यात्मक विस्तार - यो खराब छ। Traditionalists सधैं आधारभूत संस्करणमा यो परिवार को वयस्कहरूको लागि बाइक ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ।
मोडेल "Strid 5.2"
यो क्लासिक को संस्करण रूपमा देख्न सकिन्छ। त्यो पाँचौ पुस्ता पहिले नै बाइक "Strid" को एक प्रतिनिधि हो भन्ने तथ्यलाई बावजुद, यो आधारभूत अवधारणा खुलिरहेको को शहरी मिनी-बाइक। त्यसैले, मोडेल एक परम्परागत एक-फ्रेम, 16 इन्च पाङ्ग्रा र 9.6 किलो तौल संग सुसज्जित छ। प्रविधी तह सरल छ र तीन आधारभूत डिजाइन तत्व "Strid" समावेश छ। साइकल यसको बारेमा 15-20 सेकेन्ड लाग्छ, यो pedals, फ्रेम र स्टीयरिंग को विश्लेषण प्रदान गर्दछ। निर्माताको रूपमा, यो संस्करण यस सन्दर्भमा केही शङ्का छ हुनत, मान्छे 192 सेमी सम्म बढ्दै लागि उपयुक्त छ। त्यहाँ घुँडा बारेमा उजुरी ड्राइभिङ को पाठ्यक्रम मा स्टेरिड़ स्पर्श हो भन्ने तथ्यलाई - खैर, बाइक को एक साधारण समस्या लिफ्ट पाङ्ग्रा वृद्धि गरी मात्र सही छ भन्ने छ।
देख्न सकिन्छ रूपमा मोडेल बीच विशेष constructional मतभेद छैन - कम्तिमा सिद्धान्त मा उपकरण अपरिवर्तित रहन्छ। एउटै LT संस्करण को मामला मा अवलोकन छ। अहिलेसम्म यो मोडेल क्लासिक "Strid" को devoid छ एक रोचक सुविधा, छ। साइकल 5-बोले rims र मूल प्लास्टिक सामान प्रदान। खैर, ट्रंक को आधारभूत संस्करण एल्यूमीनियम बनेको छ। यसलाई त्यहाँ वृद्धि भण्डारण विश्वसनीयता रूपमा निश्चित प्लस छ। तर, प्लास्टिक खण्ड यसलाई थप व्यावहारिक बनाउन, जनसंचार साइकल कम गर्छ।
पहिलो छाप आधारित धेरै यस्ता साइकिल को affordability बारेमा निष्कर्ष बनाउन। यो आंशिक सत्य हो, तर सबै कुरा सापेक्ष छ। विशेष आधारभूत उपकरण र, LT मोडेल खर्च हुनेछ कि 30-35 हजार तथ्यलाई। RUB। EVO मोडेल लागत 50-55 हजार। RUB। पैसा को लागि तपाईं एक सभ्य र परम्परागत बाइक किन्न सक्नुहुन्छ, तर यस मामला सबै नै यसलाई जो बनाउन एक साइकल "Strid" एक परिष्कृत डिजाइन र उच्च गुणवत्ता सामाग्री, छ। यस्तो मोडेल को चिनियाँ बराबर 15-20 हजार खर्च गर्न सक्छन्।, तर गुणस्तर धेरै कम हुनेछ। यो अधिकार यी बाइक आज मात्र ताइवानी कम्पनी मिंग साइकल छ निर्माण गर्न भनेर बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ। नक्कली नै मोडेल, सस्ता, तर निराश मालिक द्वारा पुष्टि जो अगाडि ब्रेक।
बाइक को समीक्षा
हामी ब्रान्ड को असली प्रतिनिधि कुरा भने, राय थप सकारात्मक हुनेछ। सबै bikers को पहिलो सबै अवस्थामा प्रयोग मा सजिलो पुष्टि गर्नुहोस्। लाभ विशेष गरी अघि परम्परागत साइकल प्रयोग गर्ने डिजाइन, सूचना हो। "Strid" समीक्षा ज्यादातर अनुकूल छन्, र अझै पनि विवाद धेरै हुन्छ। उदाहरणका लागि, यो चढेर गर्दा यसको compactness यो बाइक पनि न्यूनतम सुविधा प्रदान गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ। यो आंशिक सत्य हो र अनुभवी प्रयोगकर्ता लामो यात्राको बनाउन आशाले यस्तो मोडेल खरीद सिफारिस छैन। इष्टतम सञ्चालन अवस्था "Strid" - एक चिल्लो शहरी उद्यानपथ वा पेटी कवरेज को एक आषा गुणवत्ता संग। पनि किनभने आरामदायक सीट लागि आवश्यकता उल्लेख लायक अनुभवी को सल्लाह को।
"Strid" - छैन क्लासिक बाइक व्यक्तिगत गतिशीलता बढि संकुचित हालतमा आधारमा सिर्जना गर्न मात्र प्रयास छ। तर, यो सहज आन्दोलन र एकदम राम्रो कार्यक्षमता लागि वास्तविक headroom छोडेर गर्दा मार्क सैंडर्स, संरचना अधिकतम आकार घटाउन व्यवस्थित थियो। तैपनि, बाइक तह "Strid" प्रतिबन्ध धेरै छन्। तिनीहरूले अझ वा कम चिल्लो सडक, curbs र अन्य अवरोध को कमी आवश्यक पर्दछ। समस्या को एक अलग समूह बाइक को जाडो सञ्चालन गर्न सम्बन्धित छ। यो अवधिमा आवश्यकता नियमित सफाई लागि freeways र ब्रेक pedals सामना गर्न सकिन्छ। यसको सट्टा बाइक को मूल मालिकको चाँडै शहर वरिपरि सार्न सक्षम छ। र एक समयमा यो गर्दा मोटर चालकहरुलाई, उदाहरणका लागि, एक ट्राफिक जाम वा स्थिर इन्जिन एक आशाहीन गडबड घण्टामा लागि खडा गर्न सक्नुहुन्छ।
डाली डिस्क मा बीएमडब्ल्यू बाइक: समीक्षा, फोटो
कार्डियो ट्विस्टर: यसको बारेमा समीक्षा
नजिक दायरा सौन्दर्य: - प्रयोगकर्ता समीक्षा छ कायाकल्प myostimulator लागि प्रभावकारी
चाल लागि साइकिल: मोडेल, वर्णन, चयन
राम्रो बेसबल ब्याटिङ कसरी चयन र mitten गर्न?
लिफ्टको लक्षण: उपचार, आघातको लक्षण
मायालु-Fi उपन्यास जस्तै विभिन्न पुस्तकहरू
पीसीमा राम्रो शूटर
सारांश: "प्रोफेसर डावेलको प्रमुख।" जानकारी जुन पुस्तक बाट आशा गर्न के बुझ्न मद्दत गर्नेछ
मामा शमू - संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रिय प्रतीक को एक
बुद्धि विकल्प: एक छोडपत्र वा छैन? बुद्धि विकल्प: बाइनरी विकल्प दलाल
कसरी यसको उपयोगी गुण संरक्षण, निगालो खाना पकाउनु
माउन्ट Etna - सौन्दर्य र भयानक बल
Hepatitis बी विरुद्ध रोकथाम र सुरक्षा hepatitis B बिरुद्ध टीका